အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအတွင်းရှိမွေးစားစကားလုံးများ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on July 4, 2013 at 18:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဗြိတိသျှ အင်ပါယာကြီးဟာ ၁၈ -၁၉ ရာစုအတွင်းနေမ၀င်အင်ပါယာလို့ဝံ့ကြွားရလောက်အောင် ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရှေ့အနောက် နယ်မြေတွေကိုအုပ်စိုးထားနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ် အင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာလည်း ဗြိတိန်နဲ့ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေ၊ ကိုလိုနီနိုင်ငံအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုမှာ စံနှုန်းတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ အမေရိကားရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုနဲ့အတူ အမေရိကန်၊ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဘုံစကားဟာ အင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ တခြားနေရာတွေမှာ ရှေးဆန်ပြီးကိန်းခန်းကြီးသလောက် ဘာသာစကားကိုတော့ ဒီလောက်ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။ သူတို့ဟာ ရောက်ရာဒေသက စကားလုံးတွေကို အင်္ဂလိပ်စကားထဲ လက်ခံသွပ်သွင်းလာလိုက်တာ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ကမ္ဘာသုံးစကားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အတုံ့အလှည့်အဖြစ် ကမ္ဘာကတခြားဘာသာစကားတွေဟာလည်း အင်္ဂလိပ်စကားမှာဝင်နေရာယူကြပြန်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကိုအလွှမ်းမိုးဆုံးက သမိုင်းကြောင်းအရ လက်တင်ဘာသာနဲ့ Norman conquest ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ် ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်တို့ဟာ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဒေသခံဘာသာစကားက စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ Bungalow (တစ်ထပ်အိမ်)၊ Cheetah (သစ်ကျုတ်)၊ Dacoit (ဒါးပြဂိုဏ်းသား)၊ Guru (ဂုရု)၊ Jungle (တောကြီးဂနိုင်)၊ Khaki (ကာကီရောင်၊ အညိုနုရောင်)၊ Loot (တိုက်ခိုက်လုယူသည်၊ ခိုးဝှက်လုယူသည့်ပစ္စည်း)၊ Pundit (ပဏ္ဍိတ်၊ ပဏ္ဍိတ)၊ Pyjama (ည၀တ်အင်္ကျီ)၊ Thug (လူဆိုးလူမိုက်) စသည့်စကားလုံးဆယ်လုံးသည် အသုံးအများဆုံးစကားလုံးများဖြစ်လာခဲ့ကာ အန္ဒိယဒေသခံစကားဟုပင်မထင်ရတော့ဘဲ အင်္ဂလိပ်မူရင်းစကားများပမာ အမြစ်တွယ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စကားပမာ တွင်ကျယ်လာသောူ အခြားဘာသာစကားများမှ မွေးစားထားသော အသုံးအများဆုံး စကားလုံးဆယ်လုံးစီအားအောက်တွင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Assassin ( လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူ)
Harem (မောင်းမဆောင်၊ မွတ်စလင်နေအိမ်အမျိုးသမီးသီးသန့်အဆောင်)
Safari (တောလည်ခရီး၊ အလှကြည့်ခရီး)
Sultan (စော်ဘွား၊ ပသီဘုရင်)
Sherbet (ရေတွင်ထည့်လျှင် အမြှုပ်ထပြီး ဆူသည့် အချိုရည်ဖျော်မှုန့်။ ရှာလပတ်ရည်)
Tariff (သွင်းကုန်အပေါ်စည်းကြပ်သည့် အခွန်၊ အကောက်)
Feng Shui (ဖုန်းရွှေ)
Gung Ho (တစောက်ကန်း၊ တစူးစား၊ အတူတွဲလုပ်သည်။ အမေရိကန် မရိန်းတပ်က ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်ယူသုံးထားသည်။)
Ketchup (ခရမ်းချဉ်သီးဆော့။ အချဉ်ရည်၊ စားမြိန်ရေ)
Kung Fu (ကွန်ဖူး)
Lychee (လိုင်ချီးသီး၊ နှင်းသီး)
Chimpanzee (ချင်ပန်ဇီ။ မျောက်ဝံ)
Jumbo (ဧရာမ၊ ဘိုးအင်း ၇၄၇ လေယဉ်)
Mumbo Jumbo (မှော်ယောင်ယောင်၊ နတ်ယောင်ယောင်) အဓိပ္ပာယ်မရှိ ဗလုံးဗထွေး ရွတ်ဆိုခြင်း။)
Voodoo (စုန်းကဝေ၊ မှော်ကိုးကွယ်မှု)
Adios (ဂွတ်ဘိုင်။ တာ့တာ)
Lolita (တပ်မက်ဖွယ် လှသွေးကြွယ်မိန်းမငယ်)
Platinum (ရွှေဖြူ၊ ငွေရောင်ဆံပင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီး)
Cartoon (ရုပ်ပြောင်၊ ကာတွန်း)
Dome (အမိုးခုံး၊ လိပ်ခုံး)
(မှတ်ချက်။ wall painting နှင့်မမှားစေရန် သာဒီလိုပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။)
Saloon (သီးခြားအခန်း၊ ဘား)
Blitz ( လေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်ခြင်း)
Kaput (ပျက်စီးနေသော၊ အသုံးမ၀င်တော့သော)
Kitsch (အပေါစားအနုပညာ၊ အညံ့စားအနုပညာလက်ရာ၊ ဒီဇိုင်း)
Lager (အရောင်ဖျော့ ၍အရသာပေါ့သည့်ဘီယာအမျိုးအစား)
Pilsner(ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Pilsen ဒေသတွင်ချက်လုပ်သော ဘီယာတစ်မျိုး)
Zeitgeist (သမိုင်းခေတ်တစ်ခေတ်၏အတွေးအခေါ်ယုံကြည်မှု စသည်တို့၏ထူးခြားသောလက္ခဏာ)
Booze (မူးယစ်သောက်စားသည်။ အရက်)
Cookie (ဘီစကွတ်၊ ကွတ်ကီး)
Excise (ယစ်မျိုးခွန်၊ ဖြတ်တောက်သည်။)
Yacht (ရွက်လှေ၊ အပျော်စီးသင်္ဘော)
Yankee (အမေရိကန်သား၊ မြောက်ပိုင်းသား)
Commando (ကွန်မန်ဒို၊ အထူးတပ်ဖွဲ့)
Tank (တိုင်ကီ။ တင့်ကား)
တခြားဘာသာစကားကမွေးစားထားတဲ့စကားလုံးတွေဟာလဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဝေါဟာရ အလွန် ကြွယ်ဝတဲ့ဘာသာစကား တစ်ခုအဖြစ်ရောက်အောင်ပံ့ ပိုးပေးပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ Hearty Welcome" (English) နှင့်"Cordial Reception" (French) တို့လိုအဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးတည်းကိုပင် အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်လောက်အောင် ကြွယ်ဝသည့်အတွက် easy to learn, difficult to master ဟုဆိုကြသည်မဟုတ်ပါလား။
Permalink Reply by Ratan Biswas on July 6, 2013 at 16:39
Permalink Reply by khin myint yi kyaw on July 6, 2013 at 20:22
Permalink Reply by Soe Soe on July 7, 2013 at 23:01
Permalink Reply by Aung Khant on July 8, 2013 at 7:58
Permalink Reply by esther on July 8, 2013 at 12:42
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နောက်လဲ ဒီလို ဗဟုသုတ တွေကို များများရေးပေးပါလို့
Permalink Reply by Wai Phyo Oo on July 8, 2013 at 23:21
Permalink Reply by sikedeveechan on July 9, 2013 at 0:01
Permalink Reply by Myo Myo on July 9, 2013 at 9:24
I like this. Thanks you so much
Permalink Reply by ohnmarswe on July 9, 2013 at 12:02